အကောင်းဆုံး ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အေးဂျင့် နှင့်ရှေ့နေများ Chile တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများချီလီရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်းသည်ချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခွင့်၊ ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဒုတိယနေထိုင်မှုသည်ချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် dual Residency၊ နိုင်ငံသားနှင့်နေထိုင်မှုနှင့်ချီလီတွင်နေထိုင်ခြင်း , အမြဲတမ်းနေထိုင်မှုသည်ချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ ယာယီနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ချီလီ၌နေထိုင်ခြင်း၊ နေထိုင်မှုချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၊ နေထိုင်မှု၊ ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံသား၊ ချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချီလီရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုချီလီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချီလီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ချီလီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ နံနက် ၂ နာရီခွဲတွင်ချီလီရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ချီလီတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ချီလီတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ချီလီရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ချီလီတွင်ဒုတိယအကြိမ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ချီလီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ချီလီရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ချီလီတွင်ရွှေဗီဇာ၊ ချီလီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ချီလီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ချီလီရှိဒုတိယဗီဇာ၊ ချီလီရှိဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်၊ ချီလီရှိရွှေဗီဇာ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ချီလီရှိရွှေဗီဇာ၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ ချီလီတွင်ချီလီရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ချီလီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ချီလီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ချီလီ၌အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2,500,000
လက်ရှိနှင့်ထိရောက်သောချီလီသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတောင်ထိပ်များ၊ တုန်လှုပ်နေသောရေကန်များနှင့်အလွန်များပြားလှသည့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုစွဲမြဲစေသည်။ နွေရာသီနှောင်းပိုင်းတွင်အလွန်အေးသောနှစ်တွင်နှင်းလျှောစီး။ အလွန်မြင့်မားသောချိုင့်ဝှမ်းများရှိသည်။ ကျွန်းများ၏ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ထူးဆန်းသောငါးဖမ်းခြင်းမြို့များသည်တောင်ဘက်သို့ချေးငှားသည်။ မြောက်ဘက်တွင်သဲကန္တာရကျယ်ပြန့်သည်။ ၎င်း၏အစက်မရှိသောမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းသည်ပထမကမ္ဘာ၏မူဘောင်ကိုပေးသည်။ အများပြည်သူအာဏာသည်ခရိုင်အတွင်းရှိအခြားညှိနှိုင်း။ ယေဘူယျအားဖြင့်တည်ငြိမ်သည်။
ချီလီသည်လက်တင်အမေရိကတွင်အနိမ့်ဆုံးကျဆင်းမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအခြေအနေ၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းအကောင်းဆုံးနှင့်လိုအပ်ချက်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအတွင်းရှိမည်သည့်အရာမှမဆိုရေကိုသင်သောက်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်လက်ရှိဖုန်းနှင့်ဆဲလ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းနှင့်ဒီဂျစ်တယ်တီဗီတို့ရှိသည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလမ်းမရှိသောလမ်းများသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားမှလမ်းတစ်လျှောက်တွင်ရှိနေသည်။
ချီလီရှိလူနေမှုပုံစံသည်သင်မြို့သို့မဟုတ်လူမျိုး၊ သက်ရှိ၊ လေထုနှင့်အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာအရာများကိုရွေးချယ်ခြင်းအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ မြို့ကြီးများသည်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဘဝ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလမ်းဖွင့်ရန်တံခါးဖွင့်ပေးသည်။ သငျသညျရုံးအလုပ်လိုအပ်ကြောင်းချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, ထိုအချက်မှာ, စန်တီယာဂိုဖြစ်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင်ဤနေရာတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အလုပ်များသည့်လူနေမှုဘဝသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ရှိသည်။ သို့သော်ကြီးမားသောမြို့တွင်ရှိနေခြင်းသည်၊ ဥပမာအားဖြင့်စားသောက်ပွဲများ၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ Rec စင်တာများနှင့်ရေကန်များရှိသည့်ကလပ်များသည်လူတို့၏မကျေနပ်မှုများကိုတက်ကြွ။ သာယာဝပြောမှုအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ အလားတူစွာစျေးဝယ်စင်တာများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ဈေးကွက်များလည်းရှိသည်။
စန်တီယာဂို၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေထုသည်ပြင်ပလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်။ စန်တီယာဂိုမြို့ပြင်ရှိတောင်တန်းများတွင်skiရိယာဥယျာဉ်များ၊ နှင်းလျှောစီးစီးခြင်း၊ ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများနှင့်အခြားပွင့်လင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ခရီးသွားခြင်း၊
Valparaiso သို့မဟုတ်မြောက်ပိုင်းရှိ La Serena၊ Antofagasta နှင့် Iquique ကဲ့သို့သောပင်လယ်ကမ်းခြေရှိမြို့ပြတစ်ခု၏မြို့နေဘဝသည် scuba jumping, surfing, parasailing, fishing နှင့်ရွက်လွှင့်ခြင်းကဲ့သို့သောပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းလေ့ကျင့်ခန်းများအပြင်ကမ်းလှမ်းချက်များလည်းပါ ၀ င်သည်။
သင်နေထိုင်သောလေထုအပေါ်မှီခိုနေရခြင်း၏အခြေအနေသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ချီလီ၏အဓိကကျသောချိုင့်ဝှမ်းသည်မြေထဲပင်လယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးချစ်စရာကောင်းသည်။ ဤနေရာတွင်ဘဝလမ်းစဉ်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သော၊ ပိုမိုနှေးကွေးသောဘဝလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပိုမိုငြိမ်သက်အေးချမ်းစေသည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများများပြားလွန်းခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤနယ်မြေသည်အငြိမ်းစားယူသူများအတွက်သို့မဟုတ်အဝေးမှအလုပ်လုပ်သောသူများအတွက်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်သည်။
တစ်နှစ်ပတ်လုံးရာသီဥတုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ခရီးထွက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ မျောခြင်း၊ ရေကူးခြင်းနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းကဲ့သို့သောပြင်ပလေ့ကျင့်ခန်းများစွာ၏နှစ်သက်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လက်တွေ့ကျကျချီလီ၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏ ၂၀% ကိုလုံခြုံစိတ်ချရပြီးတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်အများပြည်သူပိုင်ဥယျာဉ် ၃၆ ခုရှိသည်။ ပန်းခြံများစွာသည်ထူးခြားသောခရီးသွားလမ်းများ၊ မြေအောက်ရေလှောင်ကန်များ၊ ရေကန်များနှင့်စမ်းချောင်းများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ချီလီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်မတူကွဲပြားသောလေထုကြောင့်ထူးခြားနိုင်သည်။ မေလမှစက်တင်ဘာလအထိအလွန်စိုစွတ်။ အေးနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဤareaရိယာသည်စားပွဲသို့ယူဆောင်လာရန်တစ်တန်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်ဆီးနှင်းဖုံးလွှမ်းနေသောမီးတောင်များဖြင့်လွှမ်းခြုံထားသောရေကန်များပေါ်တွင်လှပသောရှုထောင့်များရှိသည်။ ယင်ကောင်ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်တောရိုင်းလှေသည်ထိုနေရာတွင်ပထမတန်းစားအားကစားဖြစ်သည်။
မွေးမြူပျိုး ထောင်၍ တောတောင်ဘဝသည်တောင်ဘက်တွင်လွန်ကဲစွာတည်ရှိသည်၊ ၎င်းသည်ပွဲနေ့များနှင့်အခါသမယများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ တောင်ပိုင်းရှိလူများသည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပြီးဖြုန်းတီးသူဟုလူသိများသည်။ သူတို့ဟာအသက်ရှင်ဖို့အလုပ်လုပ်ခြင်း၊
မိသားစုဘဝသည်အဓိကကျသည်။ ကျောင်းများသည်ကွန်ယက်လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်ရန်တံခါးများဖွင့်လှစ်ထားသည်။ အထူးသဖြင့်မြို့တိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပသော Fiestas Patrias ။
တောင်ပိုင်းရှိမြို့ကြီးပြကြီးများတွင်ကျက်စားပွဲများ (ချီလီပြည်သူ့ဂိမ်း) နှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ကူကာလှုပ်ရှားခြင်း၊ ဂျာမန်လူမျိုးများအနေဖြင့်ပြုလုပ်သောဘီယာပွဲတော်ကဲ့သို့သောပွဲတော်များအတွက်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေသူများသည်နယ်မြေသို့အလျင်အမြန်ရောက်ရှိနေချိန်တွင်လူ ဦး ရေသည်များပြားလာသည်။ ထို့အပြင်လမ်းဆုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ စက်ဘီးပြိုင်ပွဲများနှင့်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခမ်းအနားများလည်းအများအပြားရှိသည်။
ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
ချီလီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်5နှစ်ပြီးနောက်။
စီးပွားရေး / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ဘာဖြစ်လို့ချီလီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေ Residency ကိုသွားရမှာလဲ
လက်တင်အမေရိကတွင်ချီလီ၌အပြိုင်အဆိုင်စီးပွားရေးရှိသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးအရနှင့်နိုင်ငံရေးအရတည်ငြိမ်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်ကအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးကမ်းလှမ်းထားတယ်၊ ချီလီသည်၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်အလွန်တက်ကြွသောစီးပွားရေးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပေးသည်။
ပထမ ဦး စွာသင်သည်ယာယီဗီဇာရလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားတစ်နိုင်ငံလုံးနေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ထိုကာလနောက်ပိုင်းတွင်သင်သည်စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါကအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။ နိုင်ငံအတွင်းအနည်းဆုံး ၁၈၅ ရက်နေထိုင်ပြီးအခွန်အားလုံးကိုပေးဆောင်ရန်အထောက်အထားကိုလည်းသင်ပေးသင့်သည်။ သင်၏လျှောက်လွှာပုံစံတွင်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ချီလီနိုင်ငံတွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်လိုသူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြမည့်စာတစ်စောင်ကိုလည်းထည့်သွင်းသင့်သည်။ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်သည်သက်တမ်းတိုး။ ၅ နှစ်သက်တမ်းရှိသည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ တိုင်းပြည်၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်း၏အသိပညာနှင့်ဘာသာစကား၏အသိပညာမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်အတွက်သင်သည်အနည်းဆုံး ၆ လနေထိုင်ပြီးတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်ရမည်။ သူများသည် 185 လဆက်တိုက်မဖြစ်သင့်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ချီလီပြင်ပတွင်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ကျော်နေလျှင်သင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်မရှိတော့ကြောင်းသတိပြုပါ။ တိုင်းပြည်တွင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ရောက်ရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်နှစ်အတွင်းအနည်းဆုံးတစ်ရက်တည်းနေထိုင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပြည်ပရှိချီလီကောင်စစ်ဝန်ရုံးနှင့်အတူပုံစံကိုသင်ပုံစံဟောင်းပုံစံသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်မတိုင်မီရက်ပေါင်း ၆၀ တွင်ရေးသင့်သည်ဆိုပါကလိုအပ်ချက်ကိုကျော်သွားနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်နိုင်ငံမှ (၄) နှစ်ဆက်တိုက်စာချုပ်သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်၏ဆင်ခြေကိုသက်သေပြသင့်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ချီလီတွင်စီးပွားရေးစတင်လိုသူများသည်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၆၀၀၀၀ ဒေါ်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ၃ လအတွင်းပြုလုပ်သင့်သည်။ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရန်အတွက်သင်စတင်တည်ထောင်ခါစကုမ္ပဏီကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီကိုသတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်အစိုးရမှစစ်ဆေးပြီးကြီးကြပ်လိမ့်မည်။ ဤလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်နောက်ထပ်ကုန်ကျစရိတ်များထပ်မံပေါ်ပေါက်နိုင်ခြေရှိသည်။
ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ချီလီအတွက် ဖောက်သည်များနှင့်ချီလီရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုချီလီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့၊ ချီလီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ချီလီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ချီလီမှ Golden Visa သို့နေထိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ချီလီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်သာနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကချီလီမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုကူညီသည်။ ချီလီသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ချီလီရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ချီလီအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ချီလီအတွက်၊ ချီလီအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေ၊ ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊ ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏တတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်နှင့်ချီလီအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
ချီလီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ချီလီရှိရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုချီလီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။
ချီလီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ချီလီမှစီးပွားရေး ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ချီလီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုချီလီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့သည်။
ချီလီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ချီလီမှစီးပွားရေး ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်များရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်နှင့်အတူချီလီရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ခံမှုပေးသည်။ သူတို့သည်သူတို့နေထိုင်ရာဒေသအတွက်ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ချီလီရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်သူများနှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ချီလီရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည့်အနည်းငယ်သောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ချီလီနေထိုင်မှု
ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်မှုကိုနေထိုင်မှုအတွက်ချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချီလီနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ချီလီမှသို့မဟုတ်ချီလီသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖောက်သည်များအား Residence Permit ကိုရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံရန် Diligence ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ချီလီအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို scan ဖတ်မိရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်ရန်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
ချီလီနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာအားအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ချီလီရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများက Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ချီလီမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်မှုများအတွက်ချီလီတွင်သို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းမှသူလျှိုအစီအစဉ်များကိုချီလီ၌ဖြစ်စေ၊
နေထိုင်ခွင့် ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ချီလီ၌တရားမဝင်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ချီလီအတွက် ချီလီရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ချီလီရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ချီလီ၌သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့တွင်လုပ်ကိုင်သောချီလီအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ချီလီကိုထောက်ခံမှုမရပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ချီလီအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ချီလီအတွက် ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်ချီလီရှိသူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ချီလီ ချီလီရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ချီလီအတွက်ရှေ့ရပျ ချီလီရှိမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ချီလီအတွက်ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစေရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားသော်လည်းလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ချီလီအာဏာပိုင်များမှငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်ချီလီနိုင်ငံ၏ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ချီလီအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်ချီလီအတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏ချီလီနေထိုင်မှုမတိုင်မှီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ချီလီအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးချီလီအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်။
အမှု၌၊ သင်၏ချီလီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နေထိုင်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်များစသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ချီလီအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရနေထိုင်ခွင့်အတွက်ကုန်ကျငွေနှင့်အခြားကုန်ကျမှုများပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ချီလီအတွက်
ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ချီလီ၌ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ချီလီအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ သင်ချီလီ၌တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency အပြင်ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့သည်ချီလီတွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ချီလီနှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်း၌ပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြားအကြံပေးများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်သင်ရှာမရနိုင်ပါ။
မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အတွက်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ချီလီရှိနိုင်ငံတကာနှင့်ချီလီနိုင်ငံများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ချီလီမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ချီလီရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ချီလီသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ချီလီအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ထို့အပြင်ချီလီရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းကိုလည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများတွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incile သင်အဘို့, ချီလီအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ချီလီအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ရိုးရာ (သို့) ချီလီရှိ fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် (သို့) crypto ဖြေရှင်းချက်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သငျသညျဖို့စီစဉ်ထားလျှင်ချီလီ လက်ရှိချီလီရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ချီလီအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ချီလီရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ချီလီရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ချီလီအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ချီလီအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ချီလီအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ချီလီအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ချီလီအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ချီလီရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ချီလီအတွက် setup ကိုစီးပွားရေး
ချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ချီလီ.
ချီလီမှာရှိတဲ့ Web ဒီဇိုင်း
ချီလီရှိ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ချီလီအတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ချီလီမှာရှိတဲ့ App Development
ချီလီအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ချီလီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ချီလီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ချီလီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ချီလီတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိပြီး၊ ချီလီတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ချီလီတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်။
ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency ကသင့်ကိုယ်စားတရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးအတွက်ချီလီအတွက်ရှေ့နေလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ချီလီသို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်ချီလီသို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ချီလီအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားရှေ့နေအားတရားဝင်ချီလီနိုင်ငံ၏နယ်မြေတွင်အသုံးပြုရန်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ချီလီကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်ချီလီစီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ချီလီနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကို `ချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှု၊ ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှထောက်ခံခြင်း၊ ချီလီမှာ
ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုချီလီသို့နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ချီလီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ချီလီစီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ချီလီနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုချီလီသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်၊ ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားနှင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ အကောင်းဆုံးမှာချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ချီလီရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ချီလီအတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ချီလီရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ချီလီရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ချီလီရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ချီလီအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ချီလီအတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ချီလီစီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ချီလီနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ချီလီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသည်။ ချီလီနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ချီလီတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ချီလီအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ချီလီရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်ချီလီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ချီလီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ချီလီရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ချီလီရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ချီလီရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ချီလီအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေစသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ချီလီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ချီလီနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်ကိုရရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ချီလီသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ချီလီအတွက်ထောက်ခံသောရွှေဗီဇာအစီအစဉ် ချီလီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ချီလီရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ချီလီအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ချီလီရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ချီလီရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ။
ချီလီအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ချီလီရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ချီလီရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ချီလီရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ချီလီအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ချီလီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ချီလီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ချီလီရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ချီလီရှိအေးဂျင့်များသည်ချီလီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
ချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency မှချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးဆောင်ရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံမှမဆိုနိုင်ငံသားများအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာအာရှမှချီလီကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အာဖရိကမှချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှချီလီကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တောင်အမေရိကမှချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Residency၊ သီရိလင်္ကာမှချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါလ်မှချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ယူအေအီးမှချီလီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ချီလီအတွက်
ချီလီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
စန်တီယာဂိုCámara de Comercio
ပါပလော Neruda - အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Rapa Nui အမျိုးသားဥယျာဉ်
Gobierno de ချီလီ- ချီလီအစိုးရ။
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - ချီလီ
Nacional de Estadísticas Instituto
Misión Permanente de de ချီလီနိုင်ငံ Naciones Unidas
Economist.com | တိုင်းပြည်ရှင်းလင်းချက် - ချီလီ
မြူနီစီပယ်က de Santiago
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာသတင်းအချက်အလက် Catalog: ချီလီ
Bolsa က de Comercio က de Santiago
ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ် - ချီလီ
ချီလီနိုင်ငံ၏တရားဝင်တရားဝင်အဖွဲ့ စန်တီယာဂိုက de ချီလီ
ကွန်ဂရက်ရှာဖွေရေးဥပဒေစာကြည့်တိုက် - ချီလီ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ - ချီလီ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန- ချီလီနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန။
ချီလီနိုင်ငံ၏ Senado de la- ချီလီသမ္မတနိုင်ငံဆီးနိတ်သည်ချီလီနိုင်ငံ၏နှစ်ဆကွန်ဂရက်၏အထက်လွှတ်တော်ဖြစ်သည်
အမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်း - ချီလီ
ချီလီ - LANIC
ဘီဘီစီနိုင်ငံအကြောင်း - ချီလီ
Presidencia de la República de ချီလီ- ချီလီသမ္မတရုံး။
link ကိုမှ ချီလီ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ချီလီအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်အဟုန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်